Mugwagwa E-Bike Vagadziri & Vatengesi - China Road E-Bike Fekitori
FUNNCYCLE, ikambani yeR & D uye yekugadzira inyanzvi mumabhasikoro emagetsi uye scooter anopfuura makore gumi.
Mainjiniya edu ane yakawanda expenrience muR & D magetsi scooter uye emagetsi mabhasikoro.
SEBIC 16 padiki diki vhiri fo ...
SEBIC 700C yakavanzwa bhatiri v ...
SEBIC 20 padiki 8 kumhanya suspe ...
SEBIC 700c yepakati mota hydraulic mabhureki emugwagwa guta emagetsi bhasikoro
Nokubatanidza hunyanzvi hwedu muE-Bikes neese-e-iyo-zvigadzirwa kubva kuShimano, Tektro uye zvimwe zvepamusoro mabhasikoro emabhasikoro, isu tinotarisira kukuunzira iwe wakanyanya kukosha magetsi emagetsi emabhasikoro pamusika.
SEBIC 28 padiki guta kune ladywoman bafang mid drive emagetsi bhasikoro
Pamberi neshure Hydraulic brake control masisitimu ane magetsi kubva kumatunhu ekudzivirira; kumberi kwekumisikidza sisitimu ine premium nyaradzo yekuvhunduka kunyorova zvinobudirira kunodzora kukanganiswa uye kupindura kune akasiyana mamiriro emugwagwa.
SEBIC nyowani dhizaini vintage guta rekusimudzira 36V 250W 700C enduro retro bhasikoro remagetsi
PAS system Iyo inonzwisisika simba rekubatsira system ndiyo patent tekinoroji inogona kuwedzera mashandisirwo mwero wekuburitsa simba kune anopfuura 83% uye nekunyatso kuwedzera hupenyu hwebasa remota nemabhatiri.
SEBIC futuristic guta nyowani nyowani hunyanzvi ebikes
Iyo HSD ine simba asi mini: Zviri nyore kubata, nyore kugovana, yakanyanyisa kugadzikana kuchovha, -uye zvese izvi mune compact dhizaini ipfupi pane yakajairwa bhasikoro. Kunyangwe iwe uri kukwira, kuchengetera, kana kuifambisa ichitenderedza, iyo imhepo yekubata. Ipfupi pane bhasikoro renguva dzose uye huremu hwayo hwakafanana neyakajairika ebike.
SEBIC Yakakwira simba mukadzi mugwagwa ebike
Kune iyi modhi, isu takasanganisira akatsetseka uye CST 28 mavhiri akave akabatanidzwa necushy 2.0-inch matai, saka anogona kutenderera pamusoro mazhinji kutsemuka, mapundu, uye maburi zviri nyore kuve nechokwadi kuti hapana chinomira munzira yako munzira yako kuenda kune yakanaka nguva .
SEBIC Yakakwira magetsi guta vakuru 36v 48v lithium bhatiri mugwagwa bhasikoro bhasikoro ebike
Aluminium Alloy bhatiri yakavanzwa dhizaini. Kumiswa kwakasimbisa forogo, kwakawanda mufashoni, kugadzikana uye kusimba. LCD mwenje nemanyanga zvinokutendera kuti ufambe zvakanyanya zvakachengeteka husiku.
SEBIC 28 inch hub mota 250w 350w 36v 48v emagetsi bhasikoro
Mberi neshure Hydraulic brake control masisitimu ane magetsi kubva kumatunhu ekudzivirira; kumberi kweforogo kumiswa sisitimu ine premium nyaradzo yekuvhunduka kupinza zvinobudirira kunodzora kukanganisa uye kupindura kune akasiyana mamiriro emugwagwa. Yakakwira mhando Shimano 8-Speed ​​giya, kumwe kusiyanisa kwematanho, uye hukuru hwenzvimbo kugadzikana.
SEBIC 700c yechinyakare yekufambisa disc yakaputsa mugwagwa guta ebike
Nakidzwa nezvose zvakanakira bhasikoro pasina kuomeswa pane SEBIC 700RM Electric Hybrid Bike. 700RM e-bhasikoro ine 500-watt pedal inobatsira hub-drive mota iyo inobvumidza iwe kuchovha kuenda kure uye kutora makomo marefu nyore. Ingosarudza danho rako rerubatsiro pane chigunwe-pad chinodzora uye pedal senguva dzose.
SEBIC 26 inch inozivikanwa mumugwagwa mutambo dhizaini yepamusoro simba yemagetsi emagetsi emigwagwa bhasikoro
Ziva bhasikoro munzira nyowani nyowani ine 26 inch Electric Bike muBlack. Iyi 7-yekumhanyisa bhasikoro rekubatsira bhasikoro rine aruminiyamu furemu uye ino yakapfava kukwira kuchakuendesa iwe kwese kwaunoda kuenda zviri nyore. Iyo zvakare ine kumberi nekumashure disk mabhureki. Iyi e-bhasikoro inouya nebhatiri (kugona kwe13Ah) uye charger.
SEBIC 700C aluminium alloy 6061 ine simba bhasikoro remagetsi
Nakidzwa nekunze uye hutano mabhenefiti ebhasikoro kutasva, pasina mamwe emamiriro ezvinhu sekusvetuka kwekukwira kukwira uye nguva refu dzekufamba, neSEBIC e-Bike. Iyi e-Bikes ine mota uye bhatiri rakabatanidzwa mubhasikoro.
SEBIC 700C yakavanzwa bhatiri vintage mugwagwa guta bhasikoro remagetsi
Iyo yakakosha yakakosha kune iyi ebike ndeyecheni yekutyaira uye bhandi drive sarudzo. Ivo vane yavo pundutso, Inonyanya kufarirwa nevatengi.